Raila Odinga oo ka haray tartanka doorashada Kenya - BBC News Somali
Image caption Raila iyo hoggaamiyayaasha kale ee NASA
Hoggaamiyaha mucaaradka ee Kenya Raila Odinga ayaa sheegay "asiga iyo ku xigeenkiisa Kalonzo Musioka ay ka hareen tartanka doorashada ee la qaban lahaa dhammaadkan bishan".
Wuxuu sheegay in dalabaadkooda aan la aqbalin ka dib go'aankii maxkamadda ee ay ku laashay doorashadii bishii August.
Guddiga doorashada ee Kenya IEBC ayaa kullan degdeg ah yeelanaya ka dib markii Raila uu ku dhawaaqay in tartanka uu ka haray.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo olole siyaasadeed ku jira ayaa sheegay "dhib kuma qabno doorasho lagu noqdo. waxaan hubnaa in aan heleyno codad ka badan ku wii hore."
Raila Odinga ayaa sheegay in "go'aankoodu uu ahaa in doorashada ku celiska ah lagu qabto hannaanka ay maxkamadda amartay, kaas oo uu dhigayo dastuurka".
Qoraal ay soo saareen hoggaamiyayaasha mucaaradka waxay ku sheegeen in "IEBC ay si ula kac ah uga hor timi isbedelka muhiimka ah si loo xaqiijiyo in doorashada 26-ka bishan u noqoto mid xor iyo xalaal ah".
"Doorashada keli ah ee Jubilee ay aqbalayaan waa mid ay ayaaga ku guuleystaan," ayuu sheegay Raila oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa.
"Waxaa cad in is bedelka uu yahay mid wax looga qabanayo qaladaadkii ka dhacay doorashii horraantii August. Waxaa taas sabab u ah in la adeegsanayo in markale doorashada soo socoto lagu shubto," ayey sheegeen mucaaradka Kenya ee NASA.
"Is bedel la'aan doorasho ma dheceyso," ayey ku dhawaaqeen hoggaamiyayaasha mucaaradka ka dib markii ay shirka jaraa'id dhammeeyeen.
Muuqaal Muuqaal ku saabsan ahmiyadda doorashada Kenya
Maqal Falanqeyn: Go'aanka maxkamadda Kenya siduu u shaqeyndoonaa?